Hotanterahina eo amin’ny « Parvis » ny lapan’ny tanàna amin’ny alakamisy 16 janoary 2020 amin’ny 10 ora maraina, ny famindram-pahefana eo amin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny vao voafidy Naina Andriantsitohaina. Hatao avy hatrany amin’io andro io ihany koa ny fametrahana samboady maha olom-boafidy ny Ben’ny tanàna vaovao, handraisany ny toerany sy hiantsorohany amin’ny asa aman’andraikitra voatondron’ny lalàna mifehy ny vondrombahoakam-paritra.
Nametrahan’ny vahoaka fitokisana hitantana indray ny Kaominina ambonivohitra Antsiranana mandritra ny efa-taona i Jean Luc Djavojozara. Nohamafisin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny vokatra vonjimaika navoakan’ny CENI, ary dia ofisialy izao ny maha Ben’ny tanànan’Antsiranana an’i Jean Luc Djavojozara. Kandida tsy miankina no nirotsahany tamin’ny fifidianana natao ny 27 novambra 2019.
Sambany ny antoko Tia Tanindrazana no nisedra safidim-bahoaka amin’ny fifidianana, ka iny fifidianana kaominaly natao tamin’ny 27 novambra 2019 iny no nisantarany izany. Kaominina miisa 34 no nandrotsahan’ity antoko tarihin’i Tahina Razafinjoelina ity kandida Ben’ny tanàna sy Mpanolontsain’ny tanàna. Miisa dimy ireo kandida Ben’ny tanàna voafidy ofisialy araka ny vokatra navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana Antananarivo omaly. Tato amin’ny Faritra Analamanga, dia voafidy ho Ben’ny tanàna ao amin’ny Kaominina Alakamisy Fenoarivo, Distrika Antananarivo Atsimondrano i Rakotobe Christian, izay kandida notohanan’ny antoko Tia Tanindrazana. Fanintelony misesy izao i Rakotobe Christian no voafidy ho Ben’ny tanànan’Alakamisy Fenoarivo.